Ahoana ny fomba hanamboarana ny lesoka 2000 amin'ny twitch? - Lalao
Ahoana ny fomba hanamboarana ny lesoka 2000 amin'ny twitch?
Twitch dia mihetsika tsikelikely amin'ny tontolon'ny streaming mivantana ary mitaky horonantsary. Namonjy mpijery an-tapitrisany, mpijery isan'andro. Na izany aza, misy serivisy tsy miovaova ary fahadisoana tsy fahita matetika ao amin'ny Twitch.tv. Na izany na tsy izany, mety hisy ny lesoka tampoka toy ny lesoka sasany izay maharitra kaody 2000:Nisy lesoka tamin'ny tambajotra. Azafady manandrama indray (lesoka # 2000).
Raha ampitahaina amin'ny lesoka hafa mety hitranga, ny error 2000 no olana lehibe indrindra ary mety hisy fiatraikany amin'ny mpampiasa marobe.
Tari-dàlana vitsivitsy hafa:
Ahoana ny fomba hijerena ireo log chat twitch?
Fix 2000 Network Error amin'ny Twitch:
1. Mamelombelona ny renirano
Andao aloha isika handalo ny dingana mora indrindra. Tsy fitsipika ity fa ezaka eo anilanao fotsiny. Mety hitranga amin'ny divergence kely indrindra fa ny streaming dia miteraka error 2000.
Ny tokony hataonao dia ny famelombelona indray impiry aorian'ny fahatapahan'ny hadisoana. Raha sanatria, tsy mandeha ny famelombelona dia azonao atao ny manamarina dingana hafa etsy ambany.
2. Atsaharo vetivety ny antivirus an'ny antoko fahatelo
Toy ny mpampiasa hafa, mety mampiasa fiarovana miorina amin'ny tranokala ianao. Ny anton'ity olana ity dia rindrambaiko antivirus kilasy fahatelo.Ny fomba famahanany lesoka dia toy ny famerana tsotra izao ilay modely ao amin'ny safidin'ny mpanjifa ary hanomboka hanompo indray i Twitch.
Na dia maro aza ny rindrambaiko antivirus hisafidianana, miankina amin'ny rafitrao izay antivirus mifanaraka amin'ny tsara indrindra. Tsy azonao atao ny manondro ireo antivirus izay manakana ny fandefasanao horonan-tsary ary mampiakatra lesoka voalaza etsy ambony.
Na izany aza, zava-dehibe ny mitazona fiarovana amin'ny rafitrao ary misafidy mifanaraka amin'izany. Araka ny tolo-kevitray dia tokony mankany amin'ny 'Bull Guard' ianao. Manampy amin'ny fitazonana ny lesoka Twitch izy ary omena.
3. Zahao ny fifandraisana amin'ny Internet
Ny lesoka 2000 dia mitranga rehefa tsy mandeha tsara ny Internet satria ireo karazana lesoka ireo dia mifandraika amin'ny olan'ny tambajotra.Mba hijerena raha misy olana amin'ny Internet na tsia dia mila manamarina ny fitetezana ianao. Raha tsy mahita olana amin'ny fitetezana Internet ianao dia mitohy hatrany ny olana amin'ny serivisinao Twitch.
Mba hamahana io olana io dia mila averinao fotsiny ny router WIFI anao aorian'ny iray na roa minitra ary mifandray indray amin'ny WIFI.Raha mijanona amin'ny router WIFI ny olana dia azonao atao ny mifandray amin'ny toerana mafana finday hijerena raha toa ny olana amin'ny WIFI anao na tsia.
4. Famerenana indray ny PC
Mety efa nanandrana an'io fika io ianao, fa raha tsy nanao izay hamerenanao indray mandeha indray mandeha ny solo-sainao.Raha manao an'ity dia jereo fotsiny raha mandeha any aoriana ny fisintomana ny fikandrana manavao na zavatra toy ny riaka, fisintomana rakitra, sns.
Raha misy fisintomana mandeha ao aoriany dia hisy fiantraikany amin'ny Twitch anao izany satria hividy ny tamba-jotra ao anatiny izy ary ny Twitch dia tsy hahazo tambajotra ampy araka ny takiana.Soso-kevitra ny hampiatoana ny fisintomana rehefa mampiasa Twitch ianao ary raha mbola tsy afa-po amin'ity dingana ity ianao dia mandehana amin'ny dingana manaraka.
5. Vonoy ny VPN na Proxy anao
Tamin'ity dingana ity dia nahazo fahafaham-po ny mpamaky rehetra.Raha ny tena izy rehefa mihodina ny VPN ianao dia mety hiteraka olana maro amin'ny tamba-jotra misy anao ary ohatra, dia haneho lesoka tsy misy dikany toy ny error 2000.Mba hialana amin'ireo karazana lesoka toy izany dia mandehana fotsiny amin'ny tontonana fanaraha-maso VPN ary vonoy vonjimaika izy io.
Vantany vao voahidy ny fivoahana avy amin'ny tranokalanao dia sokafy indray izy ary tadiavo ireo mpampita horonantsary Twitch izay efa nojerenao ary jerena raha miasa tsy misy VPN na tsia.
6. Atsaharo ny Ad Blocker
Mety hiasa koa ity fikafika ity. Ny tokony hataonao dia ny manaisotra ny ghostery. Ity dia karazana blocker doka izay mampiato ny fandefasana horonantsary Twitch.Ankoatry ny ghostery, raha manana karazana Adblocker toa uBlock Origin ianao, Adguard, sns dia tsy maintsy ajanonao fotsiny izany amin'ny fotoana filalaovana horonantsary Twitch.
Torohevitra manan-danja -Ilaina ny mametraka Adblocker farafahakeliny ao amin'ny rafitrao. Ny fametrahana karazana dokam-barotra isan-karazany dia ampiasaina kely fotsiny ary handany ny habaka rehetra ao amin'ny rafitranao.
7. Atsaharo ny fanitarana Browser
Ny fametrahana ny fanitarana bowers dia tsy misy dikany. Amin'ny ankapobeny, tsy manana mihoatra ny iray ny fanitarana browser amin'ny rafitrao ianao. Safidio àry ny fanitarana fanitarana tsara indrindra ho an'ny fitaovanao.Raha hanaisotra ireo fanitarana fanampiny rehetra dia tsy maintsy misafidy ny fanitarana tianao esorina ianao ary avy eo tsindrio ny bokotra havanana amin'ilay fanitarana manokana ary hesorina ny fanitarana mpitety anao tsy ilaina.
8. Mitsambikina Ship amin'ny Firefox hijerena
Fomba iray hafa mora indrindra azonao andramana ho fantatra raha ny mpizaha fikarohana no tena manafintohina ny lesoka 2000 na tsia.Tokony hiditra ao amin'ny Firefox ianao raha tsy efa nametraka azy tao amin'ny solosainao na afaka mikaroka amin'ny mpitety toa ny sisiny, opéra ary avy eo jereo raha mandeha tsara na tsia ny streaming Twitch mivantana.
Farany, andao hofaranantsika ity lahatsoratra ity amin'ny fintinina fa Twitch amin'ny ankapobeny dia serivisy mivantana mivantana izay natolotry ny Amerikanina tamin'ny volana Jona 2011. Na dia lavitra ny karazana lesoka rehetra aza ity serivisy ity, raha sendra hadisoana ianao dia hadisoana izany. 2000.
Mety hitranga izany noho ny anton-javatra maro toy ny fifandraisana ambany amin'ny Internet, rindrambaiko antivirus an'ny antoko fahatelo, fanitarana extension browser tsy ilaina, mampiasa VPN amin'ny fotoana streaming Twitch. Ireo rehetra ireo no fototry ny lesoka natsangana imbetsaka rehefa mampiasa Twitch ianao.Misy fomba haingana sy mora hanafoanana ireo karazana hadisoana toy izany sy ireo olana aterak'izy ireo izay ho azonao ao amin'ilay lahatsoratra etsy ambony.
Q1. Ahoana no fomba hanamboarako ny lesoka Twitch?
taona:Azonao atao ny manamboatra an'ity lesoka ity amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny antivirus an'ny antoko fahatelo anao, ny fampandehanana vonjimaika ny VPN anao, ary hijerena fa tsy tokony hisy fisintomana mitranga any aoriana. Ireto misy antony sasany izay misy fiatraikany amin'ny asan'ny Twitch araka ny tokony ho izy.
Q2. Fa maninona aho no diso hatrany amin'ny tambajotra ao amin'ny Twitch?
taona:Ity lahatsoratra ity dia mifandraika amin'ny olana fototra rehetra izay mety hiteraka lesoka mifandraika amin'ny tambajotra miverimberina sy ny fomba famahana ireo lesoka ireo.
Q3. Fa maninona no ratsy ny Twitch?
taona:Twitch dia tsy dia tsara loatra raha ampiasain'ny ankizy amin'ny tanjon'izy ireo. Ankoatr'izay, tian'ny olon-dehibe izy amin'ny filalaovana ary ilaina koa ny mankamamy ny malalanao amin'ny alàlan'ny fahazoana karatra fanomezana Twitch.
Ny zava-drehetra tokony ho fantatra momba ny datin'ny famoahana ny American Gods Season 3 sy ny Season 4 Possibilities
amin'ny lalao fiara mihazakazaka tsy voasakana an-tsekoly
dia bluestacks soa aman-tsara ny fampiasana
ny fomba fanaovana kaonty netflix maimaimpoana nefa tsy misy carte de crédit
youtube sy mpanova video tsotra
ny fomba hahazoana robux nefa tsy mividy azy ireo
disney miampy isan'ny fitaovana